Canug 0-5 sanoActuellement sélectionné
​​In la lahaado canug ku jira da’da dugsiga xannaanada iyo barbaarinta carruurtu waxaa ay adiga ka waalid ahaan kaga dhigantahay farxad aad u badan laakiin haddana taxaddi fara badan.
Bogga Hey’adda qaxootiga ayaad waxbadan oo ku aaddan carruurta lagu dhalay Swiidhan ka akhrisan kar
Canuggu wuxuu marayaa wejiyo horuumar oo fara badan, waana caadi in waaliddiintu ay horuumarka canuggooda ka qabaan su’aalo fara badan.
Waa muhiim in aad guriga ka dhigtid mid ammaan u ah carruurta haddii aad qabtid carruur da’daan ah.
Waa caadi in ragga iyo dumarka labaduba ay fasax ka qaataan shaqada ama waxbarashada si ay guriga carruur ula joogaan. U qaybinta waqtiga fasaxa waaliddiintu waxay xiriir xooggan la leedahay aragtida xuquuqda carruurta. Canuggu wuxuu xaq u leeyahay in uu waaliddiintiisa xiriir dhaw la yeesho.
Degmooyinka ayaa mas’uul ka ah in ay jiraan dugsiyo xannaano iyo barbaarin carruureed iyo in canugga boos la siiyo.
Lacagta waalidka ee ka timaada Qasnadda ceymiska
Qeybsasho ceymiska waalidka
Hay'adda hubinta raashinka: Talo ku socoto adiga naas nuujin